बस्तीको माग गर्दै १२ घण्टे आन्दोलन
जापानबाट केयरगिभर माग, यस्तो हुनुपर्छ आवेदकको योग्यता
पन्जाबी गीतमा काइली नाचेको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल
रामकृष्ण ढकालको ‘डिभोर्स’ले हप्ताभरी नै सनसनी मच्चायो, निलमले रामकृष्णलाई डिर्भोस दिनुको कारण यस्तो
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चियाबगानले वर्षौंदेखि कर नतिरेपछि
सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न प्रधानमन्त्री नै बोल्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री नबोले अरुले लुटीरहने, काम नगर्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म ?
मासुको भाउ बढाउन ३० लाख जिउँदो चल्ला गाडियो
हर्टअट्याकको जोखिम जाडोमा किन बढी हुन्छ ?
दुई महिने शिशुलाई तताउन कोइला बालेर सुत्दा आमाछोरा दुबैको गयो ज्या’न
३२ किलो गाँजासहित पक्राउ परेका अभियुक्तहरु सार्वजनिक
पाथीभरा मन्दिरमा हेलिकप्टरमार्फत पुगेका धार्मिक पर्यटकलाई स्वागत
पक्राउ परेका अभियुक्त सार्वजनिक गर्दै प्रहरी
विज्ञान प्रदर्शनीमा प्रथम हुने विद्यालयलाई पुरस्कार प्रदान
जाडो बढेपछि आगो ताप्दै विद्यार्थी
विद्युतीय धरापमा परेर गैँडा मर्यो
भरतपुर,२० पुसः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम सेक्टर अमलटारीमा एउटा पोथी गैँडा आज बिहान मृतावस्थामा भेटिएको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीका अनुसार अन्दाजी छ वर्षको पोथी गैँडा कार्यालयको लामिचौर वन उपभोक्ता समितिअन्तर्गत कावासोती नगरपालिका १० चिलाहामा मृत फेला परेको हो । अन्नबाली खान आएको गैँडा स्थानीयवासीले बाली संरक्षणका लागि राखेको विद्युतीय धरापमा परी मरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वासुदेव पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निकुञ्जले चालु आर्थिक वर्षमा छ गैँडा कालगति र विभिन्न कारणले मरेको जनाएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग दैजी–झलारी खण्ड अवरुद्ध
राजविराजका विद्यालय तीन दिन बन्द
दुई लाख घुस लिएको अभियोगमा वडाध्यक्ष पक्राउ
प्रतिनिधिसभामा चार शोक प्रस्ताव पारित
कष्टकरपूर्ण जीवन बिताइरहेका थापालाई युकेका प्रवासी नेपालीद्वारा पाँच लाखभन्दा बढी सहयोग
क्षेत्रीय सडक कालोपत्र शुरु
डोल्पामा तीन दिनदेखि टेलिफोन सेवा ठप्प
हेटौँडा, १३ मङ्सिर: प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशस्तरको प्रहरी ऐन २०७६ बन्ने बताउनुभएको छ...
हुम्लामा हिमपातसँगै चिसो बढ्यो
प्रदेश नं ३ का सबै जिल्लामा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम
जानकीलाई न्यानो काखमा राखेर रमाउँदै कृषिमन्त्री केसी
जीप चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध
सबैलाई चकित पार्ने रोबटको अनौठो हर्कत देखियो, यी युवतीलाई प्रेम प्रस्ताब राख्दै गर्यो यस्ता कुराहरु (भिडियो सहित)
तम्घास, ४ मङ्सिर । गुल्मीमा एक युवती चार दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएकी छन् । जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका–५ रजस्थल जाउनडाँडा बस्ने १७ वर्षीया पूजा अर्याल सम्पर्कविहीन भएकी हुन् । मङ्सिर १ गते आइतबार बिहान घरबाट हिँडेकी उनी सोही दिन साँझबाट नै सम्पर्कविहीन भएको परिवारले जनाएको छ । छोरी सम्पर्कविहीन भएपछि बुबा नारायण [...]
‘दिगो र सुरक्षित संरचना समयमै बनाऊँ’
उखु किसान र चिनी उद्योगका समस्या समाधान हुन्छ: मन्त्री भट्ट
तस्विरमा हेर्नुहोस् बलिउड सुन्दरी नायिका आलियाले किनेको यति महंगो आलिसान घर, घरको मूल्य सुनेर छक्क पर्नुहुनेछ ?
रणवीरसँग ब्रेकअपपछि कैटरिनाले गरिन् अहिले सम्मकै ठुलो खुलासा
सत्य स्वरुपको शब्द र संगीतमा तिमीले छोडेपनि बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक
इन्द्रेणीको कृष्ण कंडेल दाई मेरो भगवान हुन् भन्दै रुदै मिडियामा आइन इन्द्रेणीमा नाचेर भाइरल खड्का
गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाको नयाँ गित ‘वीर गोर्खाली’ सार्वजनिक
टिकटकमा भाइरल काली भनेर चिनिने पुजा पहिलोपटक मिडियामा, सबैले थोपोडा नपरेकी भनेर कमेन्ट गर्छन
‘यो कुरा गोप्य’पछिको प्रमोदको अर्को गीत ’लुकी लुकी चोरी चोरी’ मा नाजिर र एलिशाको रोमान्स (भिडियो)
गायक टंक बुढाथोकीको कान्छा कान्छी सार्वजनिक
बन्ने भए प्रकाश सपूत हिरो, भन्छन् सानैमा हिरो बन्ने सपना बल्ल पुरा हुने भयो !
तपाईलाई थाहा छ ? निन्द्रा नपुग्नु ठूलो रोग हो, जसले निम्त्याउँछ ठूलो समस्या
महिनावारी गडबडीलाई निको पार्न देखि क्यान्सर लाग्नबाट बचाउने कुरिलो खानुका यस्ता छन् अरु फाइदा
कस्तो अचम्म! पाँच रुपैयाँमै खाना, मानिसहरुको भिड थामिनसक्नु,भयो यस्तो अचम्म सबै चकित (हेर्नुहोस भिडियो)
बोनम्यारो पीडित बालिकालाई सहयोग
शरीरमा देखियो यस्ता १० लक्षण भने तपाई अस्वस्थ हुनुहुन्छ !
यस्तो कालो दागले हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपायबाट हटाउन सकिन्छ
हप्तामा कतिपल्ट शारिरिक स*म्पर्क गर्दा बच्चा बस्छ ? बाँझोपनाबाट कसरी बच्ने ? डा. सबिना सिम्खडाको सुझाब
कमलविनायकमा अधिकांश औषधि पसल अवैधरूपमा सञ्चालित
काठमाडौँ । जापान जान हिँडेका पर्वतका एक युवकको नि*धन भएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका अन्दाजी ३० वर्षका कृष्ण प्रसाद तिवारी जापान जान भनेर भारतको [...]
मलेसियामा मासु पेल्ने मेसिनमा परेर नेपाली कामदारको मृत्यु
जापानले फेरि माग्यो २ हजार भन्दा धेरै नेपाली कामदार, यसरी पाइन्छ जान
आफ्नै बाबुको वच्चा जन्माउन नसकेर १३ वर्षे छोरीको सुत्केरी हुने क्रममा निधन, ४ वर्षदेखि बाबुले कर*णी गर्दै आएको रहस्य पत्ता लगायो प्रहरीले
अमेरिकासँगको विवादका बीच इरानी राष्ट्रपति रउहानी जापानमा
नेपाल आइडल भन्दा पुरानो कार्यक्रम खुल्ला मञ्च, लुकेका यस्ता राम्रा प्रतिभाको खोजी, अचम्मको कार्यक्रम (हेर्नुहोस भिडियो)
नेपाल आइडल भन्दा पुरानो,गाउँ गाउँम लुकेर रहेका प्रतिभाको खोजी गर्दै आएको कार्यक्रम खुल्ला मञ्च रहेको छ । झापाको दमकमा रहेको पाथीभरा एफ एमको एउटा गायन कार्यक्रम जसलाई दिपक ओलिले सन्चालन गर्छन । कार्यक्रम खुल्ला मन्च जसले हरेक हप्ता गाउँ तथा सहर जताततै लुकेर रहेका प्रतिभालाई स्थान दिने गर्छ । कार्यक्रम प्रस्तोता दिपक ओलि रचनाकार संगीतकार तथा गायक पनि हुन । [...]
झापामा १० रुपैयामा माशु भात खान धरान बाट आए ५० जना युवाहरु, गरे यति धेरै सहयोग (भिडियो सहित)
झापा । ५ रुपैयाँमा सादा खाना र १० रुपैयामा मासु खाना पेटभरि खान पाइन्छ भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो वास्तविकता हो झापाको दमकस्थित पश्चीम बस स्टेण्ड नजिकै रहेकाे गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरको प्राङगणमा कपडाले बेरेकाे एउटा स्टल रहेकाे छ । अगाडी पट्टी केही टेवल र कुर्सी पनि राखिएकाे छ । हाे यही स्थानमा ५ रुपैयाँमा सादा खाना र [...]
अशोक दर्जीका सडकका साथिहरुको उद्दार, चिसो भुइँमा रात काट्थे, बिचरा!आँसु झारे (हेर्नुहोस भिडियो)
झापाको दमकमा रहेका सडक बालकहरुको उद्दार गरिएको छ । जाडोमा कठ्याङरिएर बाटो लगायत चिसो भुइँमा सुतिरहेको बिजोक अवस्थामा उद्दार गरिएको हो । दमकमा सडक बालकहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको थियो । सडकमा कठिन जीवन बिताइरहेका बालकहरुको धेरै नै चिन्ताजनक अवस्था थियो । केही समय अगाडि सडकमै गित गाएर जीवन बिताइरहेका अशोक दर्जीको जीवन एकाएक परिवर्तन भएपछी उनिसङै हिड्ने गित गाउने हरेक [...]
काठमाडौँ- प्रातः स्नानं करोम्यद्य माघे पाप विना शनम् । मकरस्थे रवौ माघे गोविन्दाऽच्युत माधव । स्नानेनाऽनेन मे देव यथोक्तफलदो भव । माघ महिना भर स्नान गर्दा विशेष पूण्य मिल्छ भनी नारदीयपुराणमा उल्लेख गरिएको छ । माघ महिना भर अर्धोदित सूर्य आधा सूर्य उदाएको समयमा स्नान गर्नु भनिएको छ । यस समयमा सबै तीर्थहरू श्रीसूर्यमा गएर बसेका हुन्छन् । थप जानकारी [...]
बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश सकेरै छाड्ने भए, बरु राजनै ठिक थिए कम्तिमा देश चलेको थियो:सुरेन्द्र केसी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साढे २ बर्ष हावाको भरमै बित्यो भन्दै सुरेन्द्र केसी जंगिदै मिडियामा आएका छन । गफ लगाएरै आफ्नो कार्यकाल सक्ने मन्त्रि मध्य पहिलो नम्बरमा केपी शर्मा ओली रहेको उनको जिकिर छ । जनतालाई दुख दिन मात्रै जानेको र काम केहि गर्न नजानेको उनको आरोप छ । अहिले सम्म कुनैपनि प्रगति गर्न नसकेको भन्दै उनले चर्को [...]
पाँच रुपैयाँमा खाना दिदा आयो धम्की, अब एक रुपैयाँमा कोठा 10 मा मासुभात, राती दुई बजे यस्तोसम्म गरेपछि कुमार भावुक हुँदै मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस)
पाँच रुपैयाँमा खाना बितरण गर्दा रातको दुई बजे आयो धम्की,भावुक हुँदै कुमारले सुनाए सम्पुर्ण नालीवेली,भावुक बनेका कुमार राइले अब आफू नडराउने र अब आजदेखी टाढाबाट आएर अभर पर्नेलाई एक रुपैयाँमा कोठा अनि दस रुपैयाँमा मासुभात उपलब्ध ग्गराउन थालेका छन । झापाको दमकस्थित पश्चीम बस स्टेण्ड नजिकै रहेकाे गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरको प्राङगणमा कपडाले बेरेकाे एउटा स्टल रहेकाे छ । अगाडी पट्टी [...]
कास्मिरबाट उनले श्रीमतीलाई भने:- फोन राख तर त्यही कल अन्तिम कल बन्न पुग्यो, मोबाइल अफ भो… (भिडियो सहित)
यत्तिखेर गोर्खाको रिप गाँऊ शोकमा डुबेको छ । केही बर्ष अघि कक्षा एघार पढ्दा पढ्दै भारतिय जवानमा भर्ना भएका गोर्खाका अर्जुन थापा मगरको काश्मिरमा पाकिस्तानी फौजको गोली लागेर मृत्यु भए पछि गाँऊ नै शोकाकुल भएको हो । एक महिना अघि मात्र नेपाल आएका अर्जुनले श्रीमतीसँग कुरा गर्दा गर्दै फोन राख्न भनेका थिए तर त्यो फोन नै अन्तिम भईदियो । आखिर [...]
झापामा अशोक दर्जीकै सैलीमा भेटीए यी बालक, अत्यन्तै मार्मिक गित गाएर सबैलाई रुवाए (भिडियो सहित)
झापा । करिब ७/८ महिना पहिले झापाको दमक लगायत अन्य ठाउमा गित गाएर आफ्नो परिवार पालिरहेका बाल गायक अशोक दर्जी अहिले नेपालको चर्चित बाल गायक भएका छन् । दुख र परिस्थितिले उनलाई बाटोमा गाउने बनायो । उनको स्वरको राम्रो मुल्यांकन गरेर गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीले गित रेकर्ड गराएपछि उनि रातारात हित भए । अहिले अशोक दर्जी काठमाडौँमा पढाईलाइ र [...]
पानि बेच्दै गाडी भित्र आएका यी युवाले अचानक गरे अनौठो कार्य, गाडीका यात्रुहरु परे ३ छक्क (भिडियो सहित)
मोरंग । मोरंगको पथरीमा सडकमा पानि बेच्ने एक युवा बिबेक परियार जो पानि मात्र बेच्ने हैन गाडीमा सवार गर्ने यात्रुहरुलाई पानि बेच्दै मनोरंजन समेत दिने गर्छन । २२ बर्षिय बिबेक परियार सामान्य परिवारका हुन् । उनि दिनभरि सडकमा गाडी भित्र गएर पानि बेच्ने काम गर्छन भने जाडो समयमा ट्याक्टर चलाउने काम गर्छन । उनि नेपालका चर्चित हास्यकलाकारको दुरुस्तै अभिनय गरेर [...]
पोखरामा फेरी भयो अर्को दुःखद् घटना, घाँस काट्न गएकी आमा हराईन्, कुलाको नालीमा भेटियो शब (भिडियो)
६३ बर्षिया टिका माया कुमाल मंगलबार करिब तीन बजे तिर हसिँया लिएर घरबाट निस्केकी थिईन् । श्रीमान घरमै काम गरिरहेको थिए । श्रीमती घाँस लिन गईन भनेर उनी ढुक्क भए तर राती हुँदा सम्म श्रीमती घरमा आईनन् । सदा झै छोरीको घरमा जाने गरेकी टिका माया मंगलबार राती सम्म घरमा नआएपछि आफन्त र छरछिमेकमा खोजी भयो उनको अत्तोपत्तो भएन । [...]
– कृष्ण दर्नाल पाल्पा, २० पुस । पुस यहाँ उत्पादित फापर बाली लोपन्मुख अवस्था पुगेको छ । हिमाली तथा पहाडी भेगमा उत्पादित फापर अन्नबाली हराउँदै गएको हो । व्यावसायिक रुपमा फापर खेतीप्रति किसानको आकर्षण हुन नसक्दा लोपन्मुख अवस्थामा पुगेको हो [...]
विराटनगर, ६ पुस । प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उपलक्ष्यमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिनुभएको छ । यही पुस १६ गते विराटनगरस्थित शहीद रङ्गशालामा आयोजना हुने उद्घाटन समारोहलाई भव्य [...]
गलकोट, ५ पुस । बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानामा शुक्रबारदेखि चौथो सुन्तला उत्सव शुरु भएको छ । सुन्तला उत्सवको गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटनपछि मन्त्री थापाले बाँझो जग्गालाई एकीकरण गरी ठूलो मात्रामा कृषिउपज [...]
काठमाडौँ, ३ पुस । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सबैको सहयोग, सहकार्य र समन्वय जरुरी भएको बताउनुभएको छ । न्याय परिषद्को स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उहाँले न्यायालयको सुधारका लागि एक्लो प्रयासबाट समाधान नहुने हुँदा सबै पक्षबाट [...]
दमौली, १३ मङ्सिर । विपद् परेको अवस्थामा समुदायमा रहेका साधारण जनतालाई प्रयोग गरी घाइतेको उद्धार गर्न दक्ष बनाउने उद्देश्यसहित कृष्णदल गण चापाघाट व्यारेकले विपद् प्रतिकार्य तालीम प्रदान गरेको छ । कृष्णदल गणले चार वटा विपद्का घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर सामुदायिक विपद् [...]
६७ बर्षीय बृद्ध र २१ बर्षिय युवतीलाइ अब सन्तानको इच्छा , यिनले छोडिन भने फेरी अर्की ल्याउछु (भिडियो सहित)
झापा । सुन्दा अचम्म लाग्छ तर इलामका चुलाचुली गाविसका सिंह प्रसाद लिम्बुले आफु भन्दा ४७ वर्ष कान्छी श्रीमती विवाह गरेका छन । पुजा लिम्बु भर्खरै २१ वर्ष टेकिन तर सिंह प्रसाद ६७ वर्ष पुगिसकेका छन ।धेरैले माया प्रेममा उमेरले छेक्दैन [...]